'UKUZIPHINDEZELA OKUMNANDI: UHANA SWENSEN MYSTERY': APHO KUCOCWE KHONA KUNYE NOKUSASAZWA - IINDABA
IHallmarkmarkMovies kunye neemfihlakalo okokugqibela kusasaza isavenge esitsha sodidi oluthandwayo lokubulala. Impindezelo emnandi: UHannah Swensen Mystery uqala ngeCawa, nge-8 ka-Agasti nge-9. EMpuma / ngo-8 emva kwemini. Ephakathi. Iinkwenkwezi ezintsha zefilimu uAlison Sweeney, uCameron Mathison, kunye noBarbara Niven.
Ukuba uphoswa iphambili, unokufumana enye ngoMvulo, nge-9 Agasti ngo-5 ntambama. EMpuma, ngo-Agasti 11 ngo-7 ntambama, ngo-Agasti 15 ngo-8 ntambama, ngo-Agasti 29 ngo-7 ntambama, ngo-Septemba 11 ngo-9 ntambama, ngo-Septemba 18 ngo-9 ekuseni, okanye ngo-Septemba 27 ngo-9 ntambama EMpuma.
‘Ukuziphindezela okumnandi’ kwafillelwa eCanada
Impindezelo emnandi: UHannah Swensen Mystery wafotwa eBritish Columbia, Canada, kunye naseChilliwack naseAbbotsford, ngokusekwe kwiithegi ze-Instagram ezabiwe ngamalungu.
U-Mathison wabelane ngalo mfanekiso ngoJuni 2 kwaye wawumaka eChilliwack, BC. Ubhale wathi: Olunjani uqhushumbo olufaka apha eCanada naba bafana 🤣🤣 @luciawalters_ kunye @alexbarima photobombing 🤣🤣 Ndithanda ukusebenza nani nonke !! #ihannahswensonmysteries #hallmarkmoviesandmysteries.
Ngomhla we-28 kaMeyi, uMathison wabelana ngalo mfanekiso ulandelayo kwaye wawumaka e-Abbotsford, BC. Ubhale: Umcuphi uMike Kingston kwakhona kwisindululo Ukuba nokudubula no @aliswaeney @hoganfilm @barbaraniven kunye neqela lemigulukudu
Ukufota kuqalwe ngoMeyi 17 eMaple Ridge, eBritish Columbia. U-Mathison ubhale nge-Instagram ngelo xesha:Ndonwabile ngendlela emangalisayo ukuba ndiphinde ndibekiwe [i-imeyile ikhuselwe] yenye ye-Hannah Swenson thriller !!!! Izolo ibilusuku lwam lokuqala kuseto kwaye bendihlala ndizikhupha kulwahlulo bendikade ndonwaba ukuphinda ndibekho kulo (ukongeza njengesiphumo sokuba nditye iicokies kunye neekrimu ezikhukhumalisa ngaphakathi kwezi ndawo sizidubuleyo)
USweeney utyhile ukuba nge-21 kaJulayi, bebesenza ezona zinto zibalulekileyo kwifilimu ka-Agasti 8. Ucacisile, akukho nto injengomzuzu wokugqibela !!!
UGabriel Hogan wabelane ngalo mfanekiso ngasemva kwezehlo-nge-2 kaJuni, ebhala: Hayi molweni bafo. Nantsi ifoto ka- @ _eneeneyy kunye ne- @ cameronmathison eqondiswe ngelixa ndilwela ukubamba ingqalelo ngenxa yokuba iLeafs yavuthela ukulandelelana kwe-3-1 kwaye yafumana ukukhutshwa kwindawo yokudlala kulonwabo 7.
U-Sweeney waqhula umboniso bhanyabhanya kwangaphambi kokuba waziswe ngokusesikweni kulo mfanekiso ulandelayo.
Imfihlakalo yaseHannah swensen
apho kufotwe khona
Inqaku langaphambili Iinkcukacha kuzo zonke iinkqubo ezizayo ze 'Star Trek' kunye neMidlalo bhanyabhanya Inqaku elilandelayo Kutheni uHannah Swensen's 'Ukubulala akubhakayo' enegama elitsha UJohn Panchkula
Izigaba: Hulu Tech-Iindaba Iindaba
i-sommer ray kunye nomama
UDaniel kendall megyn kelly
snyder cut post indawo yemboleko
Ikloko yonyaka omtsha yokubala ixesha
yidola ngokubanzi evulekileyo ngomhla we-4 kaJulayi